Ithegi: iincwadi | Martech Zone
Maka: iincwadi zeencwadi
NgoMgqibelo, uJanuwari 9, 2021 NgoMgqibelo, uJanuwari 9, 2021 Douglas Karr
Ukuba wehlile kwindlela yokubhala kunye nokupapasha i-ebook, uyazi ukuba ukungqubana neentlobo zeefayile ze-EPUB, uguquko, uyilo kunye nokusasazwa ayisiyonto ityhafileyo. Kukho inani lezisombululo ze-ebook phaya eziza kukunceda kwinkqubo kwaye ufumane i-ebook yakho kwiincwadi zeGoogle Play, i-Kindle kunye nezinye izixhobo. Iincwadi zeencwadi ziyindlela emangazayo yokuba iinkampani zibeke igunya lazo kwindawo yazo kwaye
Umxholo onesango: Isango lakho lokuya kwiZikhokelo zeB2B ezilungileyo!
NgoMgqibelo, Disemba 19, 2020 NgoMgqibelo, Disemba 19, 2020 Madhavi Vaidya
Umxholo onamasango sisicwangciso esisetyenziswa ziinkampani ezininzi ze-B2B ukunika umxholo olungileyo kunye nentsingiselo yokufumana isikhokelo esihle kutshintshiselwano. Umxholo wesango awunakufikelelwa ngokuthe ngqo kwaye umntu unokufumana emva kokutshintshiselana ngolwazi olubalulekileyo. I-80% yee-asethi zokuthengisa ze-B2B zibiyelwe; njengoko umxholo onamasango ubuchule kwiinkampani zokuvelisa eziphambili ze-B2B. IHubpot Kubalulekile ukwazi ukubaluleka komxholo onamasango ukuba uyishishini le-B2B kwaye unjalo
Ukusebenza kokuthengisa umxholo kubhalwe kakuhle, ukuvelisa i-300% ngaphezulu kukhokelela kwi-62% yexabiso eliphantsi kunentengiso yesiko, ingxelo DemandMetric. Akumangalisi ukuba abathengisi abaphucukileyo baye batshintsha iidola zabo baya kumxholo, ngendlela enkulu. Umqobo, nangona kunjalo, kukuba isiqwenga esihle salo mxholo (i-65%, enyanisweni) kunzima ukusifumana, ukukhulelwa kakubi okanye ukungathandeki kubaphulaphuli ekujoliswe kubo. Le yingxaki enkulu. "Unokuba nomxholo obalaseleyo kwihlabathi," kwabelwana ngalo
NgoLwesibini, Meyi 17, 2016 NgoLwesibini, Meyi 17, 2016 Douglas Karr
Sisebenzisa iinkqubo ezimbalwa zeshishini ngoku. Kuyathakazelisa ukubona umohluko kwizicwangciso zokubhabha eziphuhliswe yinkampani nganye. Njengoko ndijonga emva kwimbali yam kwishishini le-SaaS, ndincedisa ngaphezulu kweenkampani ezilishumi elinambini ukuba ziphuhlise ukuthengisa kwazo, ndiyakholelwa ukuba ndibone ezona ndlela zintle nezona zimbi zokukhwela. Okokuqala, ndiyakholelwa ukuba kukho amanqanaba amane aphambili kwiSoftware njengeNkonzo yokubhoda: Ukuthengisa ngeposi-Kubalulekile koku